ဒလမြို့နယ်၊ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊သံလွင်လမ်းမပေါ်တွင် ပေ၂၀×၆၀ အကျယ်ရှိသော မြေကွက် ရောင်းမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7393971 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တ/ဥ၊ ရတနာလမ်းမအနီးတွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းမအနီး (20 x ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7540476 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရနျကငျးမွို့နယျ, လမျးသနျ့ နရောကောငျး (ကြောကျကုနျး) စြေးနူနျးတနျ ထောငျ့မွကှေကျ အမွနျရောငျးမညျ မိုးကောငျးလမျးအနီးတညျရှိသညျ။...
ရနျကငျးမွို့နယျ, လမျးသနျ့ နရောကောငျး (ကြောကျကုနျး) စြေးနူနျးတနျ ထောငျ့မ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7612733 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အရောင်း# ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်48လမ်း.(25x60).တတိယ ထပ်တိုက်ခန်းအရောင်း
အရောင်း#ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ် 48လမ်း.(25x60).တတိယ ထပ် လျာထိုးခင်း....
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7611227 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေ (၂၁x၆၈) ကယျြဝနျးသောလုံးခငျြးနှဈထပျတိုကျပိုငျရှငျကိုယျတိုငျရောငျးလိုပါသညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7568456 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
-လိပ်စာ : သိပ္ပံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7576512 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတ (၈) ရပ်ကွက်ရှိ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7560740 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SCHG 435 စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဂွဈေးအနီးတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648549 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SCHG 433 စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၀ါးခယ်မလမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648548 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SCHG 434 စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်းအနီးတွင် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648547 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648546 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
BTHG 290 ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် 49 လမ်းတွင် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648545 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် နိဗ္ဗာန်လမ်းတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648544 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09251555272, 09251555282, 09251555292, 09451398167
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648543 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ISN 198 အင်းစိန်မြို့နယ် ပိန္နဲကုန်းရပ်ကွက် ခလမ်းသွယ်တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648542 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ISN 192 အင်းစိန်မြို့နယ် လမ်းသစ်လမ်းအနီးတွင် နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648541 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ISN 187 အင်းစိန်မြို့နယ် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာလမ်းသွယ်တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648540 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်